५० लाखको कार चढ्ने ज्ञानेन्द्र शाही फेरि हेलि’कप्टर किन्दै! यस्तो छ उनको आयस्रोत…सेयर गर्नुहो’ला।,,, – Taja Khawar
५० लाखको कार चढ्ने ज्ञानेन्द्र शाही फेरि हेलि’कप्टर किन्दै! यस्तो छ उनको आयस्रोत…सेयर गर्नुहो’ला।,,,
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ ०७, २०७८ समय: १८:४०:५१
उनले ज्ञानेन्द्र शाहीको लागि नेपाली जन’ताले सहयोग गर्दा के समस्या अरुलाई भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले नेपाली जनताको लागि सहयोग गर्ने समाजसेवा गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीको लागि हेलिकप्टर किन्दिन पनि तयार भएको दावी गरेका छन्। मनकारी नेपाली जनताहरुले सहयोग गर्दा अरुला’ई किन टाउको दु’खाई भएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले ज्ञानेन्द्र शाहीको लागि सबै रकम विदेशबाट आएको दावी गरे।(श्रोत: सामाजिक सञ्जाल)
Last Updated on: June 21st, 2021 at 6:41 pm